Fanalahidy hiadiana amin'ny fahombiazan'ny fitohanana | Bezzia
Fanalahidy hiadiana amin'ny fahombiazan'ny fitohanana
Susana Garcia | | Torohevitra momba ny fahasalamana, fahasalamana
El ny fitohanana dia olana mety hipoitra indraindray na mety hitera-doza ihany izy io, satria misy olona mora tratran'io olana io. Raha manana azy io amin'ny fomba ara-potoana isika dia tsy maintsy mifehy ny sakafo sy ny fahazarana fotsiny vao hahatsapa izay tsy mety, raha zavatra mahazatra be dia be izany ary hitantsika fa tsy mandeha ny fanafody dia tonga ny fotoana manatona mpitsabo manokana. Saingy, homenay anao ny lakilen'ny ady amin'ny fitohanana amin'ny fomba mandaitra amin'ny voalohany.
El fitohanana dia mety hiseho noho ny antony maro, manomboka amin'ny sakafo ratsy ka hatramin'ny adin-tsaina na olana amin'ny tsinay isan-karazany. Zava-dehibe ny manandrana manohitra an'io olana io. Raha tsy matotra io dia ho voavaha mora amin'ny sakafo sy torolàlana mety, fa raha tsy mitranga izany dia tsy maintsy mitady ny antony isika, satria mety ho zavatra matotra kokoa io.
1 Misotroa rano
2 Voankazo mifanohitra amin'ny fitohanana
3 Mandanjalanja sakafo
4 Ora maharitra
5 Manaova fanatanjahan-tena
6 Aza mampiasa laxatives
Iray amin'ireo ny zavatra tokony hataonao dia ny misotro rano be. Olana iraisana iray rehefa misy ny fitohanana dia ny tsy fisian ny fivalanana ary izany no mahatonga azy ireo mijanona ao anaty tsinay. Ka raha misotro ampy isika dia hanana ireo tsy fitoviana mety. Ilaina tokoa ny rano ao amin'ny vatantsika ary izany no antony ilana fisotro rano roa litatra farafahakeliny isan'andro eo anelanelan'ny rano, ny infusions ary ny ranom-boankazo. Mahasoa antsika amin'ny zavatra maro izany, satria tsy vitan'ny hoe mandalo tsinay fotsiny fa manampy amin'ny fikolokoloana ny hoditra, mitazona ny haavon'ny rano ao anaty vatana na mifehy ny fandevonan-kanina, ka io no iray amin'ireo lakilem-pahasalamana fototra tokony hotohizantsika.
Voankazo mifanohitra amin'ny fitohanana
Ny voankazo dia manana zavatra tsara maro. Amin'ny lafiny iray, manolotra tsiro matsiro ho antsika izy ireo, saingy mahasalama ihany koa, satria ny azy ireo avo dia avo ny rano ary manana vitamina maro izy ireo. Raha sendra fitohanana dia tsy maintsy mitady ireo izay manana fibre betsaka kokoa isika ary tsara kokoa ny miady aminy. Ny sasany amin'ireo soso-kevitra indrindra dia ny plum, voasary ary kiwi. Ireo voankazo ireo dia hanampy antsika amin'ny fomba mahomby amin'ny fitohanana raha ampiarahintsika amin'ny sakafo na sakafo maraina, hanombohana ny andro.
Zava-dehibe izany voalanjalanja ny sakafontsika ary manome antsika otrikaina ilaina. Ny fihinanan-tsakafo tsara dia mahatonga ny vavony hiasa tsara kokoa sy hanatsara ny fifindran'ny tsinay. Raha manampy ny rano, ny tavy ary ny otrikaina ilaina isan'andro isika dia hiasa tsara kokoa ny vatantsika. Aza atao sakafo toy ny siramamy sy sakafo voahodina, satria manimba izany ary mitondra anjara biriky amin'ny fizotra mamaivay ao amin'ny vatana.
ny ny fandaharam-potoana tsy voafehy sy ny fanovana sakafo no mahatonga ny fitohanana, satria ireo fanovana ireo dia mety hanakivy antsika. Izany no antony tsara indrindra hiezahantsika hanao fandaharam-potoana raikitra, miaraka amin'ny sakafo miaraka amin'izay. Amin'izany fomba izany, ny vatana dia hametraka fomba mahazatra izay ho mora kokoa ny hamaly voajanahary.
manao ny fanatanjahan-tena dia afaka manampy ny fitetezana tsinay koa. Ny fanatanjahan-tena dia manetsika ny hozatra ary mahatonga ny vatana hiasa tsara kokoa sy hivezivezy tsara kokoa. Izany rehetra izany dia misy fiantraikany amin'ny fizotran'ny fandevonan-kanina sy ny fivezivezena ny tsinay avy eo, koa raha manao fanatanjahan-tena isan'andro isika dia ho hitantsika koa ny tombony azo amin'izany.
Aza mampiasa laxatives
Raha tsy tena ilaina izy ireo na tsy notondroin'ny matihanina dia aleo tsy manomboka mihinana laxatives fotsiny. Tsara ho an'ny tsinay ny miasa ho azy, ary ny fitohizan'ny fampiasana laxatives dia mety hampihena azy io. Izany no antony alohan'ny hanatonana azy ireo dia mila manandrana zavatra maro hafa ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fahasalamana » Fanalahidy hiadiana amin'ny fahombiazan'ny fitohanana